भूत उतारिदिन्छु भन्दै एक लाख र औठी पनि लिए, अनि त सबै कपडा उतारेर… ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भूत उतारिदिन्छु भन्दै एक लाख र औठी पनि लिए, अनि त सबै कपडा उतारेर… !
admin April 16, 2021 समाचार, समाज	0
काठमाडौं । उदयपुरमा सबै हैरान हुने एक घटना बाहिर आएको छ । झारफुक गरी रोग निको पारिदने भन्दै गलत काम गरेको आरोपमा मंगलबार गाईघाटबाट दुई जनालाई समातिएका छन् । त्यहाँ आफूलाई धामी बताउने स्थानीय ३९ वर्षीय अर्जुन भन्ने चुडामणि श्रेष्ठ र आफूलाई माता बताउने ४५ वर्षीया जुना राई पक्राउ परेका हुन् । प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले यसको पुष्टि गर्नुभयो ।
दुई जना बिरामी महिलासँग एक लाख रुपैयाँ नगद र सुनको औँठी ठगेको र झारफुक गर्ने भन्दै सबै कपडा खोल्न लगाएर गलत काम गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार ती महिलालाई जुना राईकै घरको कोठामा राखी ईश्वर र भूत लागेकोलाई उपचार गर्ने र माता उत्तार्ने भन्दै १ लाख रुपैयाँ र सुनको औंठी चाहिने भन्दै ठगी गरेको खुलेको छ ।
यो पनिः दिसा गर्न लागेकि युवती माथि यी युवाले जे गरे
कोरोना बढेपछि अन्ततः आजदेखि दिल्लीमा भयो क’र्फ्यू
कस्तो अ चम्म भयो झापामा नब्याएको बाच्छीले दिनहु दूध दिन थालेपछि…..